abahambi abaninzi baye bakhethe ukunciphisa impembelelo yabo yekhabhoni ngokuthi iphaphazela ngaphantsi okanye ngokunciphisa umdla moya ngokupheleleyo, ubukhulu kuphendulwa umnyango Swedish iiflayithi Shame (flight ihlazo). Akuyomfihlo ukuba ukuhamba ngenqwelo moya ngoku kungomnye wabanikeli abakhula ngokukhawuleza kwinguqu yemozulu. Nangona andize uya kusoloko umdlali ngundoqo kwindlela esikhetha yokuhamba, kufuneka sikhunjuzwe ukuba ezinye iintlobo zohambo unikele ivuso Eco leeholide.
zokuhamba Qeqesha has a nostalgic adlulileyo ubabalo Ambiance kwaye enamandla travel Eco-friendly kuqala. Inikezela ngelona uluhlu nenzuzo kuquka legroom ngaphezulu, edla imoto yokutyela gama besonwabela indalo, abahamba kids Kulula kakhulu kwaye abo bafuna ukuhlala ezidityanisiweyo, akukho ndlela yokubhabha. travel Uloliwe kulingana eziqhitsini ukuba zokuhamba onoxanduva.
Ukuxhasa abahlali ayisiyiyo kuphela eco zokuhamba friendly phulo kodwa kukwayinto entle negalelo kuphuhliso loluntu. Ukuthenga apha uthetha ukuba akukho mntu kwafuneka ukuba ukuthutha ezo mpahla. Nakaninzi, oosomashishini bommandla ithuba lokuba bakhule. Kukunciphisa ikhabhoni kunye noluntu lwasekhaya luphumelele.
Indawo usimema umhambi ukuba ndibhaptize ngokwabo kuzo zonke ukuba kumele anikele. Akukho ngokwenene Ayikho indlela engcono ukusebenzisana nabantu bayo, amava enkcubeko, kwaye ujonge okusingqongileyo okungqongileyo. Ukuthatha izithuthi zikawonke wenza ukuba nje kunye nokuhamba enye indlela engcono.
Enye indlela ukuba udlale indima yakho zokuhamba ezizinzileyo kukuba uzakubanokujonga oko kwi kwikhithi zokuhamba. An kwikhithi travel eco lobuhlobo ziya kuba mhlawumbe ibrashi loqalo, imivalo ishampu, kunye neentsipho endaweni yeshawa. Iishampu ezincinci kunye neemeko zokuphilisa ezinokuphinda zisetyenziselwe ukuphinda zisebenzise. Aluminum water bottles are vital as well as metal straw.
Iintsingiselo zokuhamba ezinkulu 2020 zibonisa ukuba yokuhamba amava yindlela entsha yokuhamba. Yiya ngaphaya, it is classics. Oku kwenza kucace namava ukuba inkcubeko Ukuboniswa, imisebenzi, kunye nokuqonda okukodwa kwiindawo.
Ukuba siyikhathalele kokusingqongileyo kwaye siyayithanda art zohambo, siya kulondoloza, khusela, kwaye senze uhambo lwethu luthethe okuthile kulungelelwaniso olukhulu lweplanethi kunye eco tourism. Qala kubhukishelwa uhambo ngololiwe Gcina A Isitimela, namhlanje!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Indlela Travel Friendly In Eco To 2020?” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-eco-friendly%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
NguyenKong ecotourism europetravel ngxelo publictransportation responsibletourism train Travel